Sidee loo yareeyaa baruurta ku wareegsan dhexda? Talooyinka ugu fiican | Ragga Caqliga leh
Xagaagu waa imanayaa qof walbana wuxuu doonayaa inuu xeebta ku muujiyo jidh wanaagsan. Baruurta caloosha ayaa leh muuqaal aad u xun xagga bilicsanaanta, gaar ahaan ragga. Hiddo -wadayaasha ragga badankoodu waa inay miisaan yeeshaan oo dufanka ku ururiyaan aagga caloosha. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhinacyo badan oo la isku daro fikirka asaasiga ah iyo caafimaadka leh, jimicsiga jirka, iyo qaar kaabis ah oo kaa caawiya yareynta dufanka caloosha.
Qodobkaan waxaan ku baran doonnaa sida loo yareeyo dufanka agagaarka dhexda iyo waxa aad ku xisaabtami doonto.
1 Ka hortag dufanka
2 Sida loo yareeyo dufanka agagaarka dhexda
3 Talooyin lagu yareeyo dufanka agagaarka dhexda
4 Faa'iidooyinka iibsiga khadka tooska ah
Ka hortag dufanka
Kahor intaadan isku dayin inaad lumiso dufanka, waxaa ugu wanaagsan inaad ka hortagto uruurinta, gaar ahaan aagga caloosha. Si tan loo sameeyo, waa inaan tixgelinaa dheelitirka tamarta ee cuntadeena. Waa inaan joogteynnaa qaadashada kalori ee isku dheelitiran jirkeena. Taasi waa, maalin -maalmeedkeenna waxaan leenahay isticmaalka tamarta oo ku saleysan dheef -shiid kiimikaadkeena asaasiga ah oo lagu daray dhaqdhaqaaqeena jir ahaaneed labadaba jimicsiga iyo shaqadayada.
Nolosheena maalinlaha ah waa inaan u dhaqaaqnaa si aan u shaqo tagno, wax u soo iibsano, u soconno xayawaankeena, ula baxno kuwa aan jecel nahay, iwm. Dhammaan dhaqdhaqaaqan jireed kuma xirna jimicsiga. Si kastaba ha ahaatee, waxay kaloo isticmaashaa kalooriyada ay tahay in lagu xisaabtamo dheelitirka guud. Intaa waxaa dheer, waa inaan ku darnaa kharashka tamarta ee ku lug leh tababarka qolka jimicsiga ama dibedda. Waxaas oo dhan Waxaan ku darnaa dheef -shiid kiimikaadka asaasiga ah waxayna na siinaysaa tamarta aan haysanno. Haddii aan rabno inaan ka hortagno dufanka, waa inaan la jaan qaadnaa isticmaalka kalooriyada iyo kharashkeenna si aan miisaanka u ilaalino waqti ka dib.
Sidan oo kale, waxaan u maareynaa ka hortagga faa'iidooyinka dufanka, iyo inaan nafteena ilaalino waxaan ka fogaaneynaa dufanka ku urursan aagga caloosha. Mid ka mid ah caadooyinka ugu xun ee aan ku yeelan karno nolosheena waa hab -nololeedka fadhiga. Farqiga hadda ayaa calaamadeyn doona waqtigayaga firaaqada ah. Haddii aan waqtigeena firaaqada ku bixinno sariirta daawashada TV -ga, waxaa suurtogal ah inaan urursanno dufanka caloosha sababtuna tahay dhaqdhaqaaq jireed la'aan. Kaliya adoo socod u socda oo ku raaxaysanaya raacitaanka waa ku filan tahay in dufanka la iska ilaaliyo.
Sida loo yareeyo dufanka agagaarka dhexda
Haddii aan ku soo ururinay xoogaa baruur dhexda ah, waa inaan beddelnaa waxa aan kor ku soo sheegnay. Isku dheelitirka tamartayadu waa inay hadda noqotaa mid taban haddii aan rabno inaan yareyno boqolkiiba baruurtayada. Taasi waa, waa inaan cunnaa kalooriyaal ka yar inta aan ku bixinno maalin kasta. Kani wuxuu noqon doonaa mishiinka awoodi kara inuu gubo baruurta. Ka sokow, waxay noqotaa mid xiiso leh in lagu tababaro culeyska qolka jimicsiga si ay gacan uga geysato joogteynta murqaha Inta lagu jiro habka luminta baruurta iyo dhaqaajinta badan waxay dhalin doontaa kharash kalori oo sarreeya.
Inkasta oo jidhkeenu aanu go'aamin karin meesha uu baruurta ka lumo, caadooyinkaas waxaan ku bilaabi doonnaa in aan baruurta ka weyno aagga dhexda. Cuntadu waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa luminta dufanka. Ma aha oo kaliya muhiim in la soo bandhigo cunto caafimaad leh, laakiin sidoo kale waa in la tixgeliyaa qaadashada borotiinka iyo wadarta kaloriyada.
Jimicsiga wadnaha iyo xididdada dhiigga ayaa u noqon kara qalab wanaagsan waxay kaa caawinaysaa inaad abuurto kharash kalori oo sarreeya taas oo keeni doonta in baruurtu sii badato. Haddii aan ku darno tababarka miisaanka, waxay noqon kartaa xulafo weyn. Si kastaba ha ahaatee, jimicsiga wadnaha ma aha inuu saldhig u noqdo tababarkayaga. Ma iloobi karno tan maadaama ay lama huraan tahay in la tababaro xoog haddii aan rabno inaan lumino dufanka oo aan ahayn murqaha.
Talooyin lagu yareeyo dufanka agagaarka dhexda
Sidaad filan karto, waxaa jira cuntooyin iyo badeecado lagu taliyay oo badan iyo kuwo kale oo aan lagu talin in lumiyo baruurta dhexda. Cunto caafimaad leh waa inay ahaato aasaaska cuntadeena. Waa inaan hilmaamnaa dhammaan cuntooyinka la warshadeeyay oo ay ka buuxaan kaloriyo madhan oo aan lahayn nafaqo iyo wax yar oo hore loo sameeyay. Cuntada sida macmacaanka, cuntooyinka barafoobay sida lasagna, pizza, cunto degdeg ah, iwm. Waxaan ku soo bandhigi karnaa qaar ka mid ah cuntooyinkan qayb yar haddii tani ay naga caawinayso inaan sii wadno qorshahayaga cunidda. Si kastaba ha ahaatee, waa inaysan noqon saldhigga cuntada.
Marka laga hadlayo kaabis, waxaa jira qaar badan oo ka mid ah badeecadan onlaynka ah oo naga caawin kara inaan yareynno baruurta ku wareegsan dhexda, illaa aan u hoggaansanno saldhigyada aan hore u aasaasnay. Saldhigyo la aasaasay sida tababarka xoogga, dhaqdhaqaaqa jirka iyo isticmaalka kalooriga oo ka hooseeya kharashka. Aynu siinno tusaale si aan si fiican u fahamno: aan ka fekerno si aan u ilaalino culeyska jirkeena waxaan u baahannahay inaan cunno 2000 kcal maalintii. Iyadoo cun 1700 kcal, kordhi talaabooyinkeenna maalinlaha ah oo xooji tababarka saacad maalintii, waxay aad uga badan tahay in baruurta la waayo waqti ka dib.
Sidoo kale waa inaad fahanto in yareynta dufanka agagaarka dhexda aysan ahayn wax degdeg ah. Gaar ahaan haddii hidahaagu u muuqdo inuu ku uruuro dufanka aagga caloosha, waxay qaadan doontaa waqti dheer in lagu gubo dufankaas. Kordhinta ayaa kaa caawin karta inaad kordhiso kharashaadka kalooriga marka aad nasato iyo in la cabudhiyo rabitaanka cuntada si yaraanta kalooriyuhu ay aad ugu adkaysan karto.
Maalinteenna ilaa maanta waxaan haysannaa ikhtiyaarro badan oo aan ku iibsan karno badeecado naga caawin kara inaan yareyno dufanka dhexda ku wareegsan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka iibsashada internetka waa taas waad garan kartaa ra'yiga macaamiisha kale ee ku saabsan badeecada su'aashu ku jirto. Intaa waxaa dheer, fududeynta sameynta hal guji waxeey kaa dhigeysaa inaadan "lumin" waqtigaaga jir ahaan aadida dukaanka oo aad ka faa'iideysato waqtigaas si aad u tababarto.
Markaad wax ku iibsanayso internetka waxaad arki kartaa badeecadda oo isbarbar dhigi kartaa qiimayaasha si aad u hesho isku -darka kaamil ah ee kaabayaasha kaa caawin kara inaad yarayso dufanka agagaarka dhexda. Ha iloobin in adigoon u hoggaansamin saldhigyada, alaabooyinkani ma laha wax ku ool la mid ah. Haddii aadan haysan cunto wanaagsan, sheyga laftiisu kaa caawin maayo inaad lumiso dufanka. Marka aasaaska la dhiso, plugins -ka ayaa hagaajin kara hanaanka oo dedejin kara.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo yareeyo dufanka dhexda agteeda oo aad yeelato jirka aad rabto xagaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Sidee loo yareeyaa baruurta ku wareegsan dhexda?